Asidi i-hyaluronic ngoba emalungeni: amalungiselelo kanye nokubuyekeza ngazo
Izibalo owomileyo ube yiziphethu Izibalo zikhomba ukuthi oyedwa noma omunye isifo emalungeni emhlabeni lihlupheka, wonke umhlali yesihlanu baseRussia phakathi kwabo, abantu abangaba yizigidi ezingu amabili. izinguquko esiwohlozayo ngokuhlanganyela (ukhwaliti ubuhlungu emuva, samathambo kanye nabanye) kulandele amanzi emzimbeni futhi ukubhujiswa uqwanga izicubu. Kwenye yezingxenye ezinkulu ezakha sezicubu zezinzwa futhi eziqukethwe ukutshezi lwabantu yemvelo, kuyinto asidi i-hyaluronic. Ukuze emalungeni kuyinto into yemvelo kungaba iyisibusiso, ngoba kuyakusiza ukwanda ukuhamba kanye ekunciphiseni izinhlungu. Wide esikhundleni zemvelo uketshezi lwamalunga emalungeni kwabantu - the asidi i-hyaluronic - kwandisa viscosity yayo, ehilelekile yokudla nokubuyisela hyaline uqwanga isakhiwo futhi kuthuthukisa ngokuhambisa (ngisho cishe wabhubhisa) izakhiwo cartilaginous ehlombe, hip kwamajoyinti, lula ukuhamba umuntu. Kwenzeka kanjani lokhu?
amalunga omzimba abe nempilo futhi ogulayo: ukubaluleka unamasu asidi i-hyaluronic
Isakhiwo ithambo ngokuhlanganyela enempilo yakhiwa ebusweni-camera hyaline okuqinile uqwanga, ulwelwesi lwamalunga abami odongeni ngaphakathi capsule articular futhi uketshezi lwamalunga, articular ebusweni lubricity futhi, ngenxa izakhiwo viscoelastic, cushioning leso sicelo. Hyaline uqwanga ukumboza izicubu ithambo, ithola amandla kusukela izingqimba engaphansi, kanye kusukela uketshezi lwamalunga. Ngo amalunga omzimba abe nempilo it has a isakhiwo aminyene futhi egeza nokunwebeka ketshezi ke Athambisa ebusweni futhi ngaleyo ndlela kusiza kakhulu ngokuhambisa ngaphakathi ithambo amalunga omzimba. In iziguli nge-osteoarthritis, kanye abantu abangaphezu kweminyaka engu-iminyaka engu-50 uketshezi lwamalunga ilahlekelwa yezihlanganisi yayo kanye nezimpahla zokuzivikela. ubuningi wayo ezicutshini ngokuhlanganyela is kakhulu ziyancipha. Uqwanga ilahlekelwa oyiyo compact, ukungqubuzana we evele articular buyaqina futhi kuholela ukuvuvukala abasezindaweni ezizungeze futhi ukubukeka ubuhlungu. Asidi i-hyaluronic ngoba ngokuhlanganyela wenza umsebenzi ezifanayo njengoba uketshezi lwamalunga, njengoba kubhekwa enye esihle - "sokwenziwa uketshezi" - njengoba ukubiza odokotela wakhe.
Ukusetshenziswa asidi i-hyaluronic amalungiselelo amalunga omzimba
Isibalo naphakathi-articular imijovo, amalungiselelo lapho hyaluronate busuka ingaphakathi eseduze itheleleke hyaline uqwanga incike ngobucayi isifo, kube sezingeni ukulimala izicubu futhi kwenza 3-5 imijovo Yiqiniso ngamunye. Okuphindaphindayo izifundo njengoba udokotela: e izinyanga eziyisithupha noma unyaka. Ibe asidi i-hyaluronic ngoba emalungeni esimweni esibhedlela futhi emtholampilo. Uma emalungeni kungukuthi umxhwele kakhulu, odokotela kungavumela isiguli yini ukushintsha isigqi wokuphila, kodwa kungcono phakathi ukwelashwa ukunciphisa umthwalo phezu kwedolo noma ehlombe ngokuhlanganyela. Imijovo ye-asidi i-hyaluronic nge ukubonakala izimpawu izicubu ukuvuvukala: ukuvuvukala, ukwanda isikhumba lokushisa emalungeni, ubuhlungu anda futhi ukungakwazi agobe amadolo hlehlisa kangcono ukuze nginqobe lezi zici. Lokhu kungenxa obuningi effusion naphakathi-articular, okuyinto asidi i-hyaluronic amalungiselelo emalungeni ngakho kanzima dilutes ukusebenza kwabo kuyehla kakhulu. Uma ukuvuvukala ngenxa izinga corticosteroids sekubonakala, ukusetshenziswa asidi i-hyaluronic anganika yi evelele zokwelapha.
Asidi i-hyaluronic (umjovo amalunga omzimba): uba yini umphumela?
Naphakathi izidakamizwa hyaluronate based enza ezintathu inqubo ezinkulu isifo emalungwini: okwandisa viscosity nenani uketshezi lwamalunga, asidi i-hyaluronic kusiza ekwehliseni ngomshikisho evele ngokuhlanganyela, elikhudlwana cushioning izinga lapho motion; ke kwandisa chondrocyte amaseli bese inikeza amandla ukukhishwa hyaline uqwanga; ekuvimbeleni izinqubo ukuvuvukala futhi kunciphisa kobukhulu izimpawu zabo. Ngakho, i-asidi i-hyaluronic emalungeni kuyinto izindlela ezinhle kakhulu ekunciphiseni izimpawu osteoarthritis futhi izinga lempilo. Lokhu gel nolwelwesi ephephile kunciphisa umthwalo phezu ngokuhlanganyela kanye uyasondla uqwanga futhi yakha sokwenziwa yemvelo nsé uketshezi womuntu lwamalunga.
Izinhlobonhlobo nge amalungiselelo asidi i-hyaluronic ngoba ngokuhlanganyela
Phatha ukunqotshwa dystrophic-esiwohlozayo amalunga iziguli imijovo ye amalungiselelo equkethe hyaluronate, saqala nge 70-yalolucwaningo kwekhulu elidlule. Umuthi kanye ngakho ngokuthi "asidi i-hyaluronic". Ukuze ekwelapheni amalunga omzimba ehlaselwe osteoarthritis deforming, it ufaneleka Ukugunda, ngoba limelela kuyindlela ephephile kunokusebenzisa indlela tekusebenta futhi kakhulu ngcono izinga yeziguli zokuphila. wathola Iningi izidakamizwa Pharmacy namuhla - kuyinto "Ostenil" (kuhlanganise "Ostenil Mini" futhi "Ostenil Plus"), kanye "Sinokrom" futhi "Sinokrom Forte" - eJalimane nase-Austria, "Fermatron" (Fermatron C "futhi" Fermatron plus ") - kusukela UK," Suplazin "- Ireland. Ngaphansi ngokuvamile, ungathola imithi enjalo ethandwa ngokuthi "adanta" (Japan), "ViskoPlyus" (Sweden), "viscos" (eJalimane), "hyalgan Phidias '(e-Italy)," Gialual Artro »(Ukraine)," Gialyuks "futhi" Giruan Plus "(South Korea)," Dyuralan Es Jay "futhi" Synvisc "(USA). Kusukela amalungiselelo ezifuywayo isehlane "Giastat" (Tula) kanye "Intradzhekt Gialuform" (laboratory "Toskani" eMoscow). Ukwakhiwa ngoba esikhundleni uketshezi lwamalunga e ukwakheka equkethe sodium hyaluronate, izixazululo, okuyinto akhiqizwa imijovo zalutho.
Izindleko zezidakamizwa asidi i-hyaluronic ngoba ngokuhlanganyela
Iningi imikhiqizo engenhla angathengwa Pharmacy. Nokho, nahlulele by ukubuyekezwa, asidi i-hyaluronic ngoba emalungeni (ikakhulukazi ezivela ngaphandle ezenziwe) - hhayi injabulo ezishibhile. Ngoba inani lentengo lomuthi kuhluka ruble isipetu ngayinye ezintathu abe izinkulungwane ezinhlanu. Ukuhlanganyela elikhulu madlana ihlanganisa ukuqaphela komkhiqizo. Izindleko imikhiqizo Russian kulesi sigaba aphansi by cishe ingxenye yesithathu. Ngaphezu kwalokho, le nqubo kuzodingeka bakhokhe okuyisilinganiso sabangu-ruble 500-1000 (ehlombe kwamajoyinti), futhi uma izinkinga hip - kuze ruble 1500. Ngokwesibonelo, omunye umjovo naphakathi-articular isidakamizwa "Gialyuks" ezihlongozwayo ruble 4750. Uma sicabanga ukuthi inkambo enjalo imijovo isidingo sokwenza ezintathu kuya kweziyisihlanu (kuye ngokuthi isimo emalungeni), isamba ungakwazi kakhulu lula isabelomali lesiguli siqu noma somkhaya. Nokho, esikhundleni impatho enjalo - hhayi operation ezishibhile futhi ezingaphephile amalunga wokufakelwa, ngakho abantu abaningi bakhetha isicelo esifike amalungiselelo hyaluronate.
Asidi i-hyaluronic: Izibuyekezo
izimila Joint ethola ketshezi ngesimo a hydrogel nge hyaluronidase ukuletha imivuzo emikhulu. Ngakho-ke, zonke imibono nemizwa esusela rheumatologists yezokwelapha futhi iziguli ezivela inethiwekhi ezivamile wathola omuhle kakhulu. Abaningi babo belulekwa ukuba ugcine on imikhiqizo izinga, ngoba incike kuye hhayi kuphela umphumela inqubo, kodwa futhi ukuze uyothuthukisa impilo amalunga omzimba. imikhiqizo Foreign banconywa ngenxa nomphumela osheshayo. Asidi i-hyaluronic ngoba naphakathi-articular amadolo isihlanganisi injected kanye ngeviki kusimo sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya. Izibuyekezo iningi leziguli ukhombise ukubonakala bese kuba khona ukuvuvukala kancane emva umjovo, ngokwethula ivolumu asidi i-hyaluronic. Phakathi nosuku noma izinsuku ukubukeka ezimbili yangaphandle ngokuhlanganyela uthola ifomu evamile.
Ngaphandle ikhwalithi izidakamizwa, umuntu phezu izinkundla ukuncoma sinake neziqu nedumela emtholampilo kadokotela. Ngemva ukwelashwa nge asidi i-hyaluronic, ngokuvumelana kubo, ende wazizwa isimo sikhululeka. ukuphila Okugcwele asebenzayo nge izizinda, ezemidlalo ozithandayo kanye nohambo itholakala futhi!
Umuthi 'Rinzai': yokusetshenziswa
Izidakamizwa "Nystatin" (ikhandlela): Imiyalelo
Kusho "Reopoligljukin". izinkomba
"Interskol" (indiza): onobuhle ezithandwayo, imfundo, ukulungisa kanye nokubuyekeza
Izimpawu umzimba wakho uxabana imithi. Umzimba wakho uxabana imithi, yini okufanele uyenze? Kanjani imithi isikhumba yokungezwani komzimba?
Komsomolsk-on-Amur: labantu, isimo sezulu ezindaweni, ezikhangayo, iholide
Masks Hotline Miami, izindlela zokuzithola. Imidlalo yekhompyutha
Glechoma hederacea futhi yendima yayo ekuqhubeleni empilweni yomuntu